Ukupheka kwizizukulwana zabathengi basekhaya kunye nabathengisi ngo-2016
Inethiwekhi yentengiso yearhente- iWorldWide
Yenza intengiso yepropathi / yenkonzo
Ngema • Bhalisa iakhawunti yasimahla
email Inombolo yokuvula
Ingaba uyilibele iphasiwedi?
Izindlu, iVillas, izindlu zekhaya, iidolophu
Iigadi kunye neendawo zokupaka
Iindawo zokugcina amanzi
Bonke abanye abaThengisi beNdawo
Indawo ethengisa izindlu nomhlaba
Ababoneleli beenkonzo zeMali
Abahambisi bokuPhucula iKhaya
Iinkonzo zokuhlola amakhaya
Iinkampani ezijikeleze umhlaba
Isiqondisi seArhente yeZindlu
Abarhwebi bezindlu kunye nabarhwebi
Ukupheka kwizizukulwana ezininzi zabathengi basekhaya kunye nabathengisi ngo-2016
EyeKhala 20, 2016 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Abathengi basekhaya kunye nabathengisi baninzi kwaye bahlukile, kwaye ngokuqinisekileyo kuyafana kuluhlu lwabo lokuthandayo xa kuziwa ekukhetheni amakhaya abo. Bakwizizukulwana ezininzi zeentsapho kwiOstreliya iphela (nakwihlabathi liphela, apho kufanelekileyo) kwaye umntu ngamnye uza neendlela ezizodwa zokukhetha. Iya kuba luxanduva lwabathengisi kunye nabathengi babathengi ngokulandelelana ukuze bajongane nezi mfuno njengoko bezisiwe.
Uphengululo lonyaka ukuza kuthi ga ngoku
Elona pesenti liphezulu labathengi loluntu lweGeneral Y okanye iMillenial. Oku kubandakanya iqela labudala beminyaka eli-18 ukuya kwengama-35. Kwiminyaka emine, eli candelo loluntu lithathe inxaxheba kwiipesenti ezingama-35 zenani lilonke lezindlu ezithengiweyo. Uninzi lwamakhaya ibe zizindlu ezizodwa zintsapho ezivalelweyo kwaye uvavanyo lubonisa ukuba ezona ndawo ziphantsi kwedolophu zithandwa kakhulu. Phakathi kwaba, malunga neepesenti ezingama-45 banabantwana abangaphantsi kweminyaka eli-18 lo gama abanye bengatshatanga okanye bengatshatanga.
Amaqela aneminyaka engama-36 ukuya kwengama-50 abumba malunga neepesenti ezingama-28 amakhaya ezivenkileni ngelixa abemi abaphezulu beyinxalenye yokuphumla. IGeneration X, okanye ngakumbi iminyaka yobudala engama-36 ukuya kwengama-50, ifunyenwe njengelona lungelo lokuziphatha nelinobuhlanga elichaphazelekayo ekuthengweni kwamakhaya. Kukwinqanaba eliphezulu lemivuzo yabo, oko kukuthi, bakwakha izindlu ezibizi kakhulu. Iqela lokugqibela labathengi lihlala libandakanya abo bathathe umhlala phantsi kwaye bafuna ikhaya elincinci ukuba bahlale ngoxolo. Baquka abo baneentsapho ezinkulu, kunye nabantu abancinci abanyamekela abazali abalupheleyo.
Elona nani likhulu labathengisi, ngokweenkcukacha-manani, belingaphezulu kweminyaka engama-50 elandelwa yiminyaka yobudala engama-36 ukuya kwengama-50 kunye namanqanaba aphezulu ngokulandelelana. Malunga neepesenti ezingama-77 zabathengisi bafunyanwa bengabatshatileyo kunye noxinzelelo oluphezulu olwenzeka kwiqela labudala be-36 ukuya kuma-50.
Kunokubakho ukuthenga okungaphezulu
Inyathelo lokuqala njengoko lihlala lithathwa sisininzi sabathengi basekhaya yayikukukhangela kwi-Intanethi kwiipropathi ezinokubhengezwa. Yonke inkqubo yokukhangela ayithathi ngaphezulu kweeveki ezilishumi ngomndilili. Malunga neepesenti ezingama-89, ngokomyinge, wabo bonke abathengi bagqibezele inkqubo yabo yokuthenga ekhaya ngokusebenzisa iarhente. Uphando lubonisa ukuba esona sizathu siqhelekileyo sokuhamba ngearhente yabathengi kukhulisa ukhetho lwabo xa bekhangela kwaye, kwiimeko ezininzi, ukuxoxa nomthengisi egameni labo.
Inzuzo, njengoko ixelelwe abathengi, yokusebenzisa iarhente kukuba abathengi bangayiqonda inkqubo yokuthenga. Ukuthumela zezona ndlela zisetyenziswa ngokubanzi ekukhetheni iarhente yabathengi yokuthenga kwabo ekhaya.
Amaxabiso aqhubeka ebangcono
Ukuxhasa ngemali ukuthenga ekhaya kubandakanya inani elikhulu kwaye amanani abonisa ukuba malunga neepesenti ezingama-60 babo bahlawula intlawulo esezantsi besebenzisa imali abayigcinileyo. Malunga neepesenti ezingama-38 ezisetyenzisiweyo kuthengiso lwendawo yokuhlala yangaphambili ukuxhasa ngemali ngokufanayo.
Malunga neepesenti ezili-13 zabo bonke abathengi bavakalise ukuba ukugcina imali yeentlawulo yeyona nto ibinzima kakhulu kwaye bebekwisigaba sobudala beminyaka engama-35 nangaphantsi. Iipesenti ezingama-66 zabo bonke abathengi babesebenzisa imali mboleko ukuhlawula intlawulo yabo. Uphando lubonisa ukuba malunga namashumi asibhozo eepesenti zabo bonke abathengi bayavuma ukuba ukuthengwa kwekhaya kutyalo-mali olufanelekileyo.
Ukukhawuleza kunye nokugcina iindleko ezifanelekileyo
Amanani abonisa ukuba malunga neepesenti ezingama-87 zabo bonke abathengi abakwiminyaka ye-36 ukuya kwengama-50 banelisekile kakhulu ziinkqubo ezichaphazelekayo ekuthengweni njengoko kuqhutywa yiarhente yabathengi. Iiarhente zenze uthethathethwano egameni labathengi kwaye baqinisekisa ukutyala imali ngokusebenzayo.
Phantse zonke izinto ezithengiweyo ezibandakanya ukusetyenziswa kweearhente zixinene ngothetha-thethwano kunye nezinye iinkqubo ezichaphazelekayo ekuthengweni kwisithuba esingaphezulu kweveki ezi-6 ukuya kwezi-8, kunye ne-pakati eziphakathi kwiiveki ezili-10. Bonke abathengi abakwiqela elingaphezulu kweminyaka engama-60 bavakalise ulwaneliseko olupheleleyo ekusebenziseni iarhente yabathengi ukulungiselela ukuthengwa kwabo ekhaya.
Ukuguqukela kwisizukulwana esitsha
Abathengi basekhaya abangaphantsi kweminyaka engama-35 baveze ubunzima babo ekuzaleni kwemali efanelekileyo yokuhlawula. Oku ikakhulu kungenxa yokubolekwa kwemali yabafundi, kunye nezinye ezibandakanya imirhumo ebekiweyo kwimfundo, imisebenzi, namatyala. Ukuthengwa ekhaya kwakuxhaphake kakhulu phakathi kwabatshatileyo kunye nabantu abangatshatanga abalandelayo emva kwesibini. Ukuthengwa kwengca akuqhelekanga kakhulu kweli qela lobudala. Ngaphezu kweepesenti ezingama-80 bakhethe ukusebenzisa iarhente yabathengi ukugqibezela kwikhaya labo elitsha.
U-Tany Clarck ubhale iibhlog kwiingcali malunga nokuthengiswa kwezindlu kunye nepropathi kwisithuba seminyaka emi-2. Wenza uphando olunzulu minyaka le kumakhaya aliqela, athengwayo kwaye athengisiwe, kunye neearhente eziququzelele ukuthengwa okanye ukuthengiswa okufanayo kuloo nyaka. Uhlala enegalelo rhoqo kwiimagazini ezimbalwa zezindlu kunye nokuzibandakanya ngenkuthalo ukuthengwa kwepropathi kunye nokuthengisa eMelbourne ukuhlala uhlaziyiwe kwiinkqubo zakutshanje kwimakethi yefa.
5 (100%) 1 ivoti
okwenyaniWW Julayi 20, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi, Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba noqhotyosho Ukuthenga indlu, Abathengi basekhaya, Abathengi basekhaya kunye nabaThengisi, Ukuthengwa kwekhaya, Ukuthengwa kwekhaya, Abathengisi basekhaya, Ukutyala imali Estate Real, Utyalo mali, Ukuthengwa kwepropathi, Ukuthenga indlu, Ukuthenga iKhaya, ukuthengiswa kwezindlu. Bookmark le Permalink.
Agasti 15, 2016 Luhlobo luni lweZinto zeKhaya eziFunwayo Nje ukuba uthathe isigqibo malunga nendawo oza kufuduselwa kuyo, lixesha lokuba uthathe isigqibo sokuba uluhlobo luni na lwekhaya olifunayo. Ezona zinto zintathu ziphambili zokhetho kumzi ngamnye ozifunayo likhaya, izindlu zedolophu kunye nezindlu ezizodwa. Ngamnye unempahla kunye nezinto ezimbi, kwaye ubandakanya indlela yokuphila eyahlukileyo kunye neseti yokuphendula. Ke ngaphambi kokufumana amakhaya athengiswayo, qinisekisa ukuba wenza uphando malunga nokuba yeyiphi indlu onokuthi ubenayo. Condo Ukuba awuthandi ukuhlala eflethini, ubomi be-condo busenokungangabi yeyakho. […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Agasti 5, 2016 Izinto ezi-6 ukwazi ngaphambi kokuthenga indlu yakho yokuqala Zombini ziyonwabisa kwaye ziyabhidisa ingqondo ukucinga kungekudala kwikamva okanye ukuba sele ujongekile, kwithuba lenyanga ezimbalwa, unokufumana indlu yakho. Kuyonwabisa ukukhangela izindlu ezinokubakho kunye nokubona ingaphakathi lamaphupha akho; Kuyaphazamisa ukujonga onke amaxwebhu awoyikisayo kunye nezinye iinkqubo ekufuneka uzifezekisile. Xa ucinga wena nomyeni wakho nikulungele ukuthenga indlu yosapho lwenu, musani ukungena ngaphakathi kwizindlu eziyimodeli niyazi kufutshane […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Julayi 27, 2016 Ukuthenga ikhaya elitsha? Iindlela ezi-4 zokwenza ukuba inkqubo ibe lula Uphando lwezezindlu kunye neenkcukacha-manani zibonise ukuba ngenyanga kaMeyi, ngo-2016, bekuthengiswe izindlu zintsha ezingama-551,000 eUnited States kuphela. Ukuthenga ikhaya elitsha inokuba yenye yezona zinto zinkulu kunye nezona zithengisayo ezenziwa ngumntu ebomini babo bonke, kodwa kwangaxeshanye, zininzi izinto ezinokubeka imingcipheko kunye nemingcipheko ekufuneka ihlolwe ukuze kuqhubeke inkqubo yokuthenga njenge ngokukhuselekileyo ngokunokwenzeka. Ukugcina ezi zinto zilandelayo engqondweni kuya kuqinisekisa ukuba u […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Oktobha 20, 2016 Iimpawu ezi-5 zokuba ucime uMgcini zincwadi zeRhafu Kuya kufuneka ukuba ubone abagcini zincwadi njengokwahluka kugqirha okanye igqwetha, ubaxelele yonke into ukusuka kwisidlo sakho sokugqibela ukuya kubuhlungu bakho kunye neentlungu zabo ukuze bazi ukuba bayokufumanisa njani na ukukukhusela okanye ukukukhusela. Kuya kufuneka uxelele kwaye ungenise yonke into kwiakhawunti yakho evela kwi-McDonald's kwi-akhawunti yakho yezemali kunye ne-IRS. Ngokunikwa oku, kuya kufuneka ulumke xa ukhetha umntu oza kulawula iirhafu zakho zobuqu kunye nezeshishini. Ngenxa yokuba i-accountant ine-CPA kwaye uyazi […] exhonyiweyo Imali yezezindlu
Julayi 27, 2016 Iingcebiso ezi-5 zokufumana ikhaya elifanelekileyo Ukufumana ikhaya elifanelekileyo kunokuthetha ukuba nokufumana enye kwintengiso oyithandayo, okanye ukuba wakhelwe eyakho ngqo. Nokuba yeyiphi na indlela onayo malunga nokufumana indlu yakho entsha, ezi ngcebiso zintlanu kufuneka zikuncede ukhombe kwicala elifanelekileyo ukuze ungene endlwini yamaphupha akho. Yenza uluhlu lweeMfuno kunye neeMfuno zaMakhaya endlwini zihlala zijikeleza inani lokulala kunye negumbi lokuhlambela okanye ubungakanani beyadi. Xa kuziwa ekufuneni ikhaya elitsha […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Julayi 13, 2016 Ukuthenga, okanye ukungathengi? Ukuthenga indlu amaphupha amaninzi! Nangona kunjalo, kwakhona luxanduva olukhulu kunye nolwexesha elide (kaninzi, luxanduva olude kakhulu, kufutshane nexesha lobomi). Uninzi lwabantu, ngakumbi iintsapho ezincinci azikhawulezi ukuthenga indlu. Bathanda ukurenta: ifikeleleka ngakumbi kusapho, akufuneki ukhathazeke malunga nolunye ulungiso, uye kwenye indawo ukuba le iyabola, okanye ude uye kwesinye isixeko ufuna umsebenzi ongcono ngaphandle kwexesha elongezelelekileyo, iingxaki kunye nengxaki yemvakalelo. yokuthengisa […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Septemba 8, 2016 Izixeko eziNtandokazi zabathandi bomculo ukuba bathenge iKhaya eMelika Umculo udityaniswa nenkcubeko yase-US kwaye awukwazi ukufumana isixeko e-US esingaphenjelelwa ngumculo. I-Blues, jazz, hip-hop, rock & roll zizinye iintlobo zohlobo lomculo zaseMelika. Umculo ubhalwe ngembali yaseMelika kwaye uninzi lweedolophu kwilizwe liphela ligcwele ziimpawu zomculo. Inxalenye enkulu yokuthenga ikhaya kukuzonwabisa ngezinto ezinokubonelelwa sisixeko sakho. Malunga nabantu, umculo yinto ebalulekileyo yokonwabisa kuyo […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Juni 8, 2016 Ukuthenga Ikhaya? Iingcebiso ezi-4 zokuNceda ukwenza amava ngokuLula ngokuNokwenzeka Wonke umntu uphupha ngokuba nekhaya kwaye usebenza nzima ukufumana elinye. Ukuthenga ikhaya kukufezekisa okuhle kwaye yenye yezona zinto zikhulu zotyalo mali onokuze uzenze. Ifaka iinkqubo ezininzi kwaye kufuneka wenze amalungiselelo kwangaphambili ukuze ube namava amnandi. Ukulungiselela kwangoko kwenza inkqubo yokuthenga ikhaya ibe lula kwaye kukunika ukuzithemba ukujongana nayo nayiphi na imiceli mngeni engalindelekanga. Ezi ngcebiso zilandelayo ziya kunceda ukwenza amava kube lula njengoko kunokwenzeka: Cwangcisa imali yakho ngaphambi kokuthenga […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Disemba 27, 2016 Izizathu zoVavanyo lweKhaya ngaphambi kokuba uthenge Abathengi basekhaya bahlala benepropathi abanomdla kuyo abahloliweyo ukuze babone izibonelelo kunye nokungalunganga kwayo. Olu hlobo lwenkonzo malusetyenziswe ngabathengi basekhaya okokuqala, kunye nabathengi bezindlu abanamava. Yindlela engabizi mali yokufumana imeko yepropathi. Ngamanye amaxesha, nokuba ukwazile ukufumana ikhaya elihle, umhloli unokufumana iimpazamo ezifihlakeleyo. Ezi zezinye zezizathu zokuba kufuneke ube nendlu […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Indawo yokuthengisa izindlu eluhlaza
Intengiso yeNtengiso yePropathi
Indawo yokwakha izindlu
Ishishini lokuthengisa izindlu
Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Amahlaya okuthengisa izindlu
Ukuthengisa izindlu nomhlaba
Yard kunye neGadi
Le site isebenzisa cookies: Fumanisa Okuninzi.
Inethiwekhi yethu: Ipropathi yaseMelika | Ipropathi yeNdiya | Ipropathi yase-UK
Uluhlu lweearhente zeeNdawo kwiHlabathi liphela
Le webhusayithi ngokuzingca isebenzisa isoftware evulelekileyo I-Osclass.
Eyona ntoWW, 2016